Aleksandr Sergeevich Pushkin - imbongi abavelele isiRashiya, Classic-Golden Age. "Umgibeli yethusi" ukuhlaziywa eyaziwa wayo ozokwethulwa ngezansi, umkhiqizo izincwadi kakhulu.
It is Kunikezelwa sikaPeter Omkhulu futhi indalo yakhe eyinhloko - umuzi iNeva Petersburg. Uhlaziyo inkondlo "lethusi wehhashi" sihlale sinikezwa nesikhathi esinzima kakhulu, ngoba isimo sengqondo wezinguquko enkulu futhi inzalo yakhe neze ngalokuvakalako. Alexander Pushkin - ungumpetha asesimweni senkondlo, yingakho-ke Kwakungenzima ziveza indaba ncamashi kuleli fomu.
"I-Bronze wehhashi": ukuhlaziya inkondlo
Inkondlo yadalwa 1833. Ngesikhathi ngokubona nombhali ukuguqulwa okukhulu inkosi-Umakhi kushintshile, ngoba Battle of Poltava wayeyiqhawe uPetru. Inkondlo ekuqaleni kuhlulekile ukucwaninga ngesihluku Nicholas 1, kodwa ke wavunyelwa ukuba ishicilelwe.
Umnqopho we izinhlamvu ezimbili - insizwa okuthiwa u-Eugene yena Bronze wehhashi. Lokhu inkondlo Ifundeka kalula yona, ngakho ungakwazi masinyane benze ukuhlaziywa. Lethusi wehhashi - nguye usola le nsizwa ekulesi sokuhlupheka kwakhe (ngemva ezinzima izikhukhula iqhawe yakhetha endlini intombi yakhe futhi ubona ukuthi lokhu inhlekelele engokwemvelo abathintekayo Isiphelo sakhe - Paracha kusaba).
Lokho okushiwo engxenyeni yokuqala yale indaba inkondlo? Likhuluma indaba ekwindla enhle Petersburg. Kwakukhona Eugene abasha futhi bekhuthele, okhathalela kakhulu futhi saddened Isiphelo sakhe. Anakho intombi - Paracha wayengezwanga ukubonwa izinsuku futhi ngempela miss wakhe. Kwaba i suku okwejwayelekile, Eugene ebuya emsebenzini futhi zacabanga ukuthi Parasha. Ebusuku, izikhukhula ezinamandla iqala, ngemva kwalokho ube esethola ukuthi othandekayo wakhe usehambile. Ngemva kwalesi sehlakalo, hero ayisekho "bukhoma": uyahamba ukusebenza zokuhlala, ophilayo the pier. Ngolunye usuku ekwindla uyahamba ngezizathu ezingaziwa kuba Bronze wehhashi.
Bronze wehhashi (ElikaDavide uhlaziyo elikhulu zabuna Russian Pushkin njalo kusenza sicabange ngokumba ngamunye) imele esabekayo on the iSigele Square. Pushkin usebenzisa izindlela ukuzenza ongeyena ukukhombisa ubudlelwane phakathi hero kanye lesikhumbuzo. Eugene iqala ukucabanga ukuthi ngemva amacala akhe Petr Veliky yena ekumlandeleni (Eugene ozwa umsindo izinselo agijima). Umbhali ngokwakhe umbiza ngokuthi iqhawe lakhe "uhlanya" kanye Bronze wehhashi esabekayo uchaza: ". ... egcwele ukululekana okukhulu"
Inkondlo "lethusi wehhashi", ukuhlaziywa kanye analysis eningiliziwe ozokusiza eziphonsa emkhathini, esichazwa Pushkin - umsebenzi omkhulu. Lokhu kwenziwa Sibonga kungenzeka ukuba osindayo osuka isitayela amagama, amasu ngqo nabanekhono amazwi ukubonisana. Ukusebenzisa Slavonicisms ukunika umkhiqizo uhlamvu real Russian futhi ugcizelela imvelo ngokunembile Russian Eugene (ebunzini, hladny), isikhathi uPetru Pushkin isebenzisa Umbala ahlukene ngokuphelele wesitayela zamagama - ". Derzhavets kwesigamu emhlabeni" Inkondlo "lethusi wehhashi" wawufanekisela ngoba umuzi iNeva. Kwaba emva kokushicilelwa le nkondlo, ebhekisela edolobheni Petersburg, bathi: "Ubuhle, City of Peter ..."
Le nkampani "Sunrise Tour": namazwana mayelana nezinsiza zethu
Izinhlobo zenhlangano yokukhiqiza